Otomatiki Cabinet Door Solution
PTP Basa Center
Five-Sekaiichi machine Center
Basa centre And CNC Router
A Kuzvipira Zvakaisvonaka
Excitech, imwe nyanzvi michina mukugadzira kambani, hwakagadzwa zvikuru kusarudza vatengi mupfungwa. Aine kugadzira Zvivako kuChina asi zvakasimba vanobatisisa pamwe chemhando yepamusoro mitemo, zvigadzirwa yedu anosimbiswa kuita dzakakwirira nemazvo panguva wakarebesa nguva wako kupfuura zvakawandisa maindasitiri zvinodiwa.
State-of-the-Art Products uye Facilities
Our-siyana nyore yepamusoro Portfolio inosanganisira Panel Furniture Production Solutions, Multi-kadikidiki 5-akabatana machine Centers, Panel namajeko, Point-to-Point Basa Centers nezvimwe machineries vakazvitsaurira kuna kuveza uye dzimwe pfungwa mafomu.
Quality harimborevi outsourced-ndokusaka tine paakapiwa kwazvo machine nzvimbo yedu pachedu. zvigadzirwa edu ose, kubva mari zvikuru yokutevedzera kuti chakaoma kunzwisisa zvikuru ndivo vari zvakarurama engineered inonzi mukuru mureza kunotarisirwa kubva kambani akaita Excitech. Zvokugadzirwa yose muitiro iri akanyatsokopwa uye zvakanyatsorongwa kudzora kuti vabudirire inosimbiswa zvakarurama uye unhu.
Zvaunoda, Our Driving Force!
Nesuwo gadzirisa mhinduro maererano nezvaunoda. Kana iri kutanga-mabhizimisi kana pamwero muduku kuvhiyiwa vane mari vakarongeka kugadzirwa mupfungwa kana kusimbiswa pamwero akavhiyiwa kutsvaka zvikuru zvoga projects- Excitech nguva dzose ane negadziriso yenyu mukugadzira zvinodiwa.
Tinosungirwa kuita kwako basa ubudirire nokupa customized zvinogadzirisa zvakafanira zvinangwa zvako. The musono kusangana pakati machineries yedu maindasitiri kushandisa michina Software uye gadziriro daidzo vadyidzani dzedu 'yemakwikwi zvakwakanakira nokuvabatsira kuzadzisa:
High unhu zvigadzirwa nomupirista kugadzirwa kunyatsoshanda
Lower mari saka kuyerwa nemari
Mupfupi kugadzirwa nguva
Maximized chokukura purofiti nani
Zvinoshamisa akaderedza kutenderera nguva
Global Kuvapo, Local Reach
Excitech vaudzewo pacharo unhu-akachenjera nokuda kwayo kubudirira kuvapo munyika dzinopfuura 90 pasi pose. Anotsigirwa rokutengesa simba uye akachenjera uye yokutengesa nomumbure uyewo hwokugadzira rutsigiro zvikwata vari akadzidziswa uye akaita kupa shamwari dzedu rwemhando yepamusoro, Excitech akawana mukurumbira pose somumwe kupfuura rakavimbika uye akavimba CNC michina mhinduro rubatsiro.
Vakazvitsaurira kuna ndikushumirei
In Excitech, hatisi chete mukugadzira kambani. Tiri mabhizimisi consultants uye mabhizimisi vadyidzani.
neunyanzvi edu unhu zvigadzirwa, mamiriro edu unyanzvi kugadzira zvivako, simba redu muna vatengi, redu nomazvo okutengesa Consultancy, uye kuzvitsaurira kwedu kutsvakurudza uye mabhizimisi kukura - zvose izvi dzinoturwa redu mabhizimisi vadyidzani munyika iri tariro vave vabudirire.
Kero: NO.1832 GANGYUANQI RD, High-Tech Dunhu Jinan, Shandong Province, PRChina
Kugadziriswa kwePanel Ficha
Work Center uye CNC Router
COPYRIGHT © 2020 JINAN SINGHUI CNC TEKNOLOGY CO., LTD